I-Golfer Bobby Locke: I-Biography kunye neNkcazo yeMisebenzi
UBobby Locke wayeyi-golfer eyaziwayo ngeendlela zakhe ezithandekayo kumdlalo, kodwa nangenxa yeziphumo eziphezulu isitayela sakhe senziwe. Wawine amaqhawe amane, kwaye mhlawumbi uye waphumelela ngakumbi xa kungenjalo ngenxa ye- PGA Tour .
Umhla wokuzalwa: uNgo-20, 1917
Indawo yokuzalwa: iGermiston, eMzantsi Afrika
Amagama omnxeba: "Iidala zePaggy Old" kunye ne "Face Muffin". "I-Old Baggy Pants" yayinguSame Snead igama lokuqamba igama likaLikeke, kuba i-Locke igqoke rhoqo kwi-knickers yegrey (izicathulo ezimhlophe, iingubo ezimhlophe, iingubo ezimhlophe kunye nezibophelelo).
"Ubuninzi be-Muffin Face" yayiyigama lakhe lesidlaliso kwi-PGA Tour ngenxa yobuso bakhe obukhulu, obunzima kunye nesimo esingazitshintshi kwikhosi.
Ukuhlaselwa kweLike kwiLikeke
I-PGA Tour: iinqununu ezili-11
EYurophu: ama-23 amaninzi
Uhambo lwaseMzantsi Afrika: ama-38 amafa
IiMidlalo ezinkulu: 4
I-British Open: 1949, 1950, 1952, 1957
Amabhaso kunye neNhlonipho kaBobby Locke
UBobby Locke: "Uqhubela umboniso kodwa ubeka inhlama." (U-Locke udlalwa ngokuqulunqa i-golf eyaziwayo.)
UBobby Locke: "Ngethuba elide kwinqanaba lam, ndaqonda ukuba ukubeka isigxina somdlalo wegalufa. Kungakhathaliseki ukuba ndingadlala njani ixesha elide, ukuba andizange ndibeke, ndize ndiphumelele."
Gary Player : "Ngenye yee-6 feet foot, kubomi bam? Ndiza kuthatha uBobby Locke. Ndiye ndababona bonke, kwaye akuzange kubekho u-putter onjengaye. Ndambona i-three-putt kanye kuphela. ... Kwafuneka uyenze ukuyikholelwa. " (Jonga iqhosha le-YouTube apho uMdlali ubonisa khona indlela yokubeka i-Locke.)
Biography kaBobby Locke
UArthur D'Arcy "UBobby" Locke wayengumnqweno waseMzantsi Afrika obalaseleyo , kwaye enye yezona zinto zibalaseleyo - kwaye zingavamile - zibeka umdlalo.
Wawuthatha umdlalo kusasa kwaye uneminyaka eyi-16 yayingu- golfer . Uqale wadlala kwiBritish Open ngowe-1936, wagqitywa njenge-amateur ephantsi. Kwiminyaka emibini kamva waphenduka waza waphumelela kweyokuqala kweenombolo zakhe zaseMzantsi Afrika ezivulekileyo.
Umsebenzi wakhe waphazamiseka yiMfazwe Yehlabathi II, ngexesha awayekhonza kuyo eMzantsi Afrika.
Ngowe-1946, uLikeke waya eMelika ukuba aphinde abuyele kwi-golf yakhe, kwaye wadlala uluhlu lweemiboniso kunye noSam Snead , ephumelela kwimidlalo e-12 kwi-14.
U-Locke wasebenzisa iminyaka emi-2/2 kwi-PGA Tour, ukuya ku-1949. Kwiimicimbi ezingama-59, wawuthatha amaxesha angama-11, wagqiba amaxesha angama-10, izihlandlo zesithathu ezisibhozo kunye neyesine amahlanu (ama-34 angama-59 kwii-tournaments kwi-Top 4). Ngomnyaka we-1948, wanqoba iNational Victory National ka-Chicago ngo-16, ehlala i-PGA Tour irekodi yomda wokunqoba.
Ngo-1949, nangona kunjalo, ingxabano malunga nokuzibophelela kokukhokelela kwikhokelela kwi-PGA Tour yokunqanda i-Locke. Ukuvinjelwa kwaphakanyiswa ngo-1951, kodwa uLikeke akazange abuyele kwiPGA Tour.
Ukususela ngo-1949 ukuya ku-1957, iLocke yafumana amaninzi kwiYurophu naku-Afrika, kubandakanywa izihloko ezine zeBritish Open. Kodwa wayebandakanyeka engozi yemoto ngo-1959 kunye neengxaki ze-migraine kunye neengxaki zamehlo eziye zaphumela ekugqibeleni ekupheleni komdlalo wakhe wokudlala.
U-Locke wayengomnye we-timeters best-time, kwaye wayengaqhelekanga kakhulu: wayebambelele kwi-putts yakhe. I-Locke yayibambelela yonke into, ngokweGolest Digest :
"Ukubhukuda kuka-Locke kwakungaphezulu kwembombo, yonke into ibingumdwebo, ukujikeleza ngokugqithiseleyo ukwenzela ukuba amangqina athethe ngama-boomerang. Kodwa ke, loo mifanekiso yafumana iithagethi zawo, kwaye emva kokuba i-putter yayifake isandla sayo, uLikeke wayesondele ingqondo, mhlawumbi i-putter engcono. "
U-Locke wayengumgcini we-snazzy kwikhosi, kwaye wayekuthanda ukucula iingoma ekuhambeni kwakhe kwi-ukulele.
UBobby Locke wakhethwa kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama ngo-1977.
UDanielle Amiee: Igalari yezithombe zeGrafer Break Break
Ixabiso leNick: I-Biography ye-Pro Golfer
Iqonga leTiger Woods njengeGolfer Professional
18 I-Pop Pop-I-Inspired Group I-Halloween Costumes
Uphi Umoya Ovuthayo?
Iindlela ezili-6 zokufundisa abafundi baseKhaya
I-University State Admissions
Imibuzo ye-FAQ malunga nePhenomena yeParanormal
Best Memem Memes
Iimoto ezigqithisileyo zeMinyaka eyi-50 edlulileyo
Vibram FiveFingers Booties for Kayaking kunye SUP Paddleboarding
I-RUIZ Igama lomxholo kunye nomthombo
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yeKapa Esperance
I-Enuma Elish: Inkolelo yeNdala eyadala kakhulu